Fisidinana Tamin’ny Voromby Tsy Miankina Nanozongozona Ny Fitondrana ao Costa Rica · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2013 21:43 GMT
Nanozongozona ny fiadidiana ny filoha sy ny firafitry ny mpiara-miasa aminy ny vaovao fa nanome fiaramanidina manokana hisidinan'ny filoha Laura Chinchilla ho any Però ny orinasan-tsolika iray.
Tamin'ny voalohany ny anton-dia dia ny hanatrehana ny fanambadian'ny zanaka lahin'ny filoha lefitra Luis Liberman, Saingy nohararaotina izany nanaovana fitsidihana ny filoha Ollanta Humala.
Nialoha ny dia, araka ny nambaran'ny mpiandraikitra ny fifandraisana ao amin'ny fiadidiana ny filoha, ny fiomanana hihaona amin'ny filoha Humala no talohan'ny resaka mety ahatafidiran'i Costa Rica ao amin'ny Firaisankinan'i Pasifika sy ao amin'ny Dinan'ny Fifanakalozam-Barotra Malalaka (TLC) nosoniavina tamin'ny volana avrily.
Nolazaina ihany koa taty aoriana fa nampiasa ilay voromby ihany koa ny filoha hanatrehana ny fandevenana an'i Hugo Chávez tany Venezoelà.
Raha efa maro ny tsy mankasitraka ny fanoloran'olo-tsotra voromby handehanan'ny filoha maimai-poana ho any Però, niampy ny olana tamin'ny 15 mey: ny orinasa nampindrana ny voromby dia manana fifandraisana amin'ny mpandraharaha hanaovana famotorana amin'ny fifandraisany amin'ny mpanao raharahan-drongony any Kolombia. Ilay mpandraharaha antsoina hoe Gabriel Morales Fallón, dia ao anatin'ny fitantanana ny orinasa Thorneloe Energy, fantatra amin'ny hoe THX amin'izao fotoana.
Araka ny nivoaka tao amin'ny fampitam-baovao Semana sy El Tiempo avy ao Kolombia, dia efa nohadihadiana tamin'ny fifandraisany tamin'ireo mpanao raharahan-drongony antsoina hoe “Chupeta” i Morales.
Francisco Chacón, minisitry ny fifandraisana hatramin'izany fotoana, no nanondro fa noheverin'izy ireo ho Olafán fa tsy Fallón no anarana faharoa iantsoana an'i Gabriel Morales, ary nilazan'izy ireo fa voafitaka ry zareo. Voamarina moa taty aoriana fa nanova ny anarany ilay mpandraharaha.
Tsy niandry ela ny valin-kafatra avy amin'ny filoha. Nandritra ny kabary nataony tamin'ny fahitalavitra no nilazany ny fepetra noraisina :
Nilaza zava-dehibe roa ny filoha nandritra ny kabarin'ny tamin'ny fahitalavitra: “Tsy ampy fitandremana ny fitantanana sy ny fanekena avy amin'ny prezidansa, fa tsy nanatontosa ny fombafomba rehetra ilaina iantohana ny fahadiovam-panaovan-javatra sy ny fiarovana”, sy nanohy ny filazana: “Tena tafiditra lalina tokoa ny fanadinoana indrindra teo amin'ny sehatry ny fiarovam-pirenena sy ny fiarovana ny filohan'ny repoblika. Mety hanimba ny endriky ny firenena eo amin'ny sehatra iraisampirenena ihany koa izany, izay nanatontosa efa hatramin'ny fotoana maharitra ny ady amin'ny fivarotana sy fanondranana rongony sy ny andian-jiolahy “.
“Tsy ho adinonay mmandrakizay ity lesona ity, fa mafy”, hoy ny filoha namarana ny teniny tao amin'ny fandaharana fahitalavi-panjakana.
Vokatr'izany niala teo amin'ny toerana nanendrena azy ny “lehilahy matanjaka” akaiky ny filoha : ny minisitry ny fifandraisana Francisco Chacon, sy ny talen'ny fiarovana sy ny fitsikilovana (DIS) Mauricio Boraschi.
Cristian Cambronero (@cambronero) nanambara toy izao tao amin'ny kaonty Twitter-ny
Sidin'ny filoha Laura Chinchilla niafara tamin'ny fianjeran'ny lehilahy matanjaka.
Nandao ny toerana nisy azy nandritra ny taona maro ihany koa ny lefiny manokana rtoa Irene Pacheco.
Nilaza i Laura Chinchilla indicó fa tsy nahatontosa ny andraikiny tamin'ny fanamarinana izay niavian'ny voromby i Boraschi mbamin'i Pacheco.
Ny filoha Chinchilla (@Laura_Ch) nanampy toy izao tao amin'ny kaonty Twitter-ny:
Nekeko ny fametraha-pialàn'ireo mpiasam-panjakana roa, ka anatin'izany ny an'ny mpiandraikitra ny ady amin'ny rongony izay nahombiazana tokoa tamin'ny ady amin'ny rongony saingy nanadino ny momba ny fiarovana ahy.
Nihanalemy ny fitondrana taorian'io ary nahena ny isan'ny olona akaiky sy mahatoky ny filoha taoriani'ty raharaha ity. Ankoatra izay, ny hamaroan'ny fahadisoana sy ny lesoka hita no nahitana fa misy zavatra banga ao amin'ny sampana fitsikilovan'ny firenena.
Samy nanomboka ny fanadihadiany manokana momba ny sidina tamin'ny vorombin'olo-tsotra, momba ny fifandraisan'ny fitondrana amin'ilay orinasa voatonona, ary momba ny tsy fanatontosana adidy ny ao amin'ny biraon'ny fampanoavana sy ny mpampanoa lalàna.
Sarin'i Ollanta Humala sy i Laura Chinchilla avy amin'ny mpisera Flickr Fiadidiana ny Presidansa Però, nopihana ny 13 mey 2013 (CC BY-NC-SA 2.0)
Tantaran'ny Costa Rica farany
28 Aogositra 2020Amerika Latina
10 Jona 2020Amerika Latina
15 Marsa 2020Amerika Latina